Yintoni omele uyazi ngaphambi kokuba ube nentlanzi yetropiki kwi-aquarium | Ngeentlanzi
Ngokubanzi, ukukhathalela iintlanzi kwii-aquariums ngokuthe ngqo. Kuxhomekeka kuhlobo ngalunye, indawo yokuhlala yendalo kunye ne-morphology, ukhathalelo abaludingayo. Abanye bajamelana namaqondo obushushu aphezulu ngokungalunganga, abanye bajongana ngcono nosawoti ophezulu, njl. Namhlanje siza kuthetha Yonke into oyifunayo kufuneka uyikhathalele ngokufanelekileyo intlanzi yetropiki.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungabanyamekela njani?
1 Yintoni omele uyazi ngaphambi kokuba ube nentlanzi yetropiki kwi-aquarium
2 Zeziphi iintlobo ozibeka ngexesha elinye kunye nohlobo lwe-aquarium
3 Iimeko eziyimfuneko
4 Ulungelelwaniso lwe-Aquarium yentlanzi yetropiki
Yintoni omele uyazi ngaphambi kokuba ube nentlanzi yetropiki kwi-aquarium
Njengazo zonke ezinye iintlobo zeentlanzi, iintlanzi zasemanzini ezifudumeleyo zifuna Unonophelo oluthile olusisiseko ukuze uphile kwaye ube nomgangatho othile wobomi. Ayikhathaleli kakhulu okanye azinikeli xesha, kodwa kufuneka athathelwe ingqalelo.
Phakathi kwezo zononophelo okanye iimfuno ezifunwa yintlanzi yetropiki zezi: ubushushu bamanzi obulungileyo, ukucoca ngokufanelekileyo i-aquarium kunye nokutya okufanelekileyo. Ngokuzalisekisa ezi mfuno zintathu zisisiseko zentlanzi yetropiki, unokuba sempilweni kwaye ubonakalise iimpawu zakho ngokupheleleyo.
Phakathi kweentlanzi zetropiki zezona ntlobo zintle kwaye zinomtsalane kwii-aquariums. Uninzi lwazo luneemilo ezingaqhelekanga kunye nemibala eqaqambileyo eyenza ukuba ikhetheke kwaye ifunwe kakhulu ngabantu.
I-aquarium yokukhetha intlanzi yakho yetropiki ibalulekile. Kukho abantu abathanda ukuba ne-aquarium enkulu kunye nabanye abasebenzisa iitanki ezincinci zentlanzi. Kubalulekile ukuba wazi iintlobo oza kuthi uzazise kwi-aquarium kwaye zingaphi iisampulu oza kuba nazo ngaxeshanye. Uhlobo ngalunye lufuna umthamo othile wamanzi ukuze lwenze imisebenzi yalo yemihla ngemihla. Ukongeza, i-morphology ye-aquarium kufuneka ibe yenye indlela okanye enye ngokuxhomekeke kuhlobo lwangaphakathi.
Ukwenza umzekelo onceda ukuqonda oku, kukho iintlobo zeentlanzi ezifuna umhombiso kwi-aquarium leyo zisebenza njengendawo yokufihla okanye yokuzala. Ezinye zifuna igrabile okanye isanti, ezinye zifuna ubuninzi bezityalo, njl. Ke ngoko, ayisiyiyo kuphela iqondo lobushushu kunye neetyuwa ekukuphela kwazo ekufuneka sizithobele.
Zeziphi iintlobo ozibeka ngexesha elinye kunye nohlobo lwe-aquarium
I-aquarium ehlala iintlobo zeentlanzi zetropiki kufuneka ibekwe ngokukhanya okungangqalanga kwaye inkulu, kulula ukuyigcina.
Xa ukhetha uhlobo oluza kungeniswa kwi-aquarium, kufuneka kukhunjulwe ukuba kukho iintlanzi ezitya ezinye, ezinye indawo kunye nezinye zizolile. Xa uzixuba, kufuneka ube nokulinganisela kunye neentlanzi ezihambelana kakuhle kwaye zineemfuno ezahlukeneyo ukuze zingabulalani.
Iintlanzi zaseTropiki zikhula kakhulu xa sele zikhulile, ke ubungakanani obukhethiweyo be-aquarium kufuneka bube bukhulu ngokwaneleyo ukuba zingagcina zonke iintlanzi zikwimeko yabantu abadala.
Kukwabalulekile ukuba i-aquarium ineendawo zezinye iintlobo zokubeka amaqanda kwaye iyaqhubeka nokuhlonipha indawo yokuhlala apho uhlobo ngalunye kufuneka uhambe kwaye uqubha ngokukhululekileyo.
Iintlanzi zaseTropiki zisetyenziselwa ukufudumeza ubushushu bamanzi. Ke ngoko, kufuneka kuthengwe isifudumezi-manzi ukuze sigcinwe silungile amaqondo obushushu angaphezu kwama-25 degrees. Amanzi kufuneka acoceke ngalo lonke ixesha, kungoko kufuneka kufakwe isihluzi ngokobungakanani betanki leentlanzi. Icebo lokucoca ulwelo kufuneka libe kumgangatho ophezulu, kuba ubomi bentlanzi buxhomekeke kuwo. Amanzi angahlambulukanga kakuhle angabangela izifo zentlanzi kwaye akhokelele ekufeni.
Inkqubo yendalo yeTropiki yenziwe zizityalo, igrabile kunye nezinye izinto ezisebenza njengendawo yazo yokufihla. Ukuphinda uyidale ngokupheleleyo indalo yendalo, itanki kuyakufuneka lihlotshiswe ukuze iintlanzi zihambe kwaye zizimele.
Ngaphambi kokubeka iinxalenye kwi-aquarium kufuneka ihlanjwe ngamanzi abalekayo Ukuphelisa ukungcola okunokungcolisa i-aquarium kunye nokwenza lula ukusasazeka kwezifo.
Ngokuphathelele ukutya, oku sele kunzima ngakumbi, kuba kuxhomekeke ngokupheleleyo kuhlobo lokutya onalo uhlobo ngalunye lokutya. Nangona iintlanzi zikwitropiki, nganye inokutya okukhethekileyo. Ezinye zazo zizilwanyana ezitya inyama, ezinye zitya utyani, ezinye ziguquka ngakumbi kwaye zitya yonke into ... Ngokutya kubalulekile ukuba wazise ngohlobo ngalunye oluza kungeniswa kwi-aquarium ngaphambili.
Enye ipharamitha ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa imeko ye-aquarium yi-pH. Uhlobo ngalunye lweentlanzi lune-pH yalo apho lunokuhlala khona ngendlela esempilweni. Ngokubanzi, Iintlanzi zihlala emanzini phakathi kwe-5.5 kunye ne-8.
Ulungelelwaniso lwe-Aquarium yentlanzi yetropiki
Ukulungiselela i-aquarium kunye nokuhlala kuyo ngokupheleleyo ukuze ubandakanye iintlobo zeetropiki, kuya kufuneka ulungiselele yonke into. Umhombiso obekiweyo, isifudumezi samanzi kunye nesihluzi.
Nje ukuba unazo zonke izinto, itanki igcwalisiwe ngaphezulu zamanzi adibeneyo. Kubalulekile ukuba amanzi etephu angasetyenziswanga njengoko eneklorine. Icebo lokucoca ulwelo kunye nesifudumezi asinakuvulwa de itanki igcwale.
Nje ukuba i-aquarium igcwele, isifudumezi kunye nefilitha zidityanisiwe ukufezekisa ubushushu obulungileyo bentlanzi yetropiki, aphakathi kwama-21 nama-29 ° C. Impendulo yokuqala kulapho uqaphela ukuba amanzi ajika abe ngamafu, kodwa oku kuqhelekile njengoko kuya kuthatha iintsuku ezininzi ukuze uqhele. Izibane zetanki leentlanzi Kufuneka bahlale iiyure ezili-10 ukuya kwezi-12 ngosuku.
Kuyimfuneko ukushiya i-aquarium ngaphandle kwentlanzi ebaleka kangangeentsuku ezininzi ukuze amanzi afikelele kwiimpawu eziyimfuneko ukugcina iintlanzi ezisempilweni ezishushu. Nje ukuba ezo ntsuku zidlule, iintlanzi ofuna ukuzazisa ngazo zaziswa nganye nganye.
Ngexesha leentsuku zokuqala, ulawulo lwe-pH kunye neqondo lobushushu kufuneka luphelele, kuba ukwanda kwentlanzi kuxhomekeke kuyo kunye nokuphila kwayo okulandelayo kunye nokuziqhelanisa nendawo entsha.
Ngale miqondiso uya kuba nakho ukonwabela ngokufanelekileyo iintlanzi zakho zetropiki kwaye ukonwabele iimpawu zazo ezizenza zikhetheke kwaye zinqweneleke kwihlabathi liphela. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nommiselo wobushushu kunye nezinye iintlobo zeetropiki ezihamba kakuhle kwii-aquariums, ndwendwela Amaqondo obushushu afanelekileyo kwintlanzi yetropiki yasemanzini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Iintlanzi zaseTropiki